Injabulo uhlelo luqokwa kowama-Crown Awards | News24
Injabulo uhlelo luqokwa kowama-Crown Awards
ISITHOMBE: sithunyelweUMfundisi Travor Phiswa nongumethuli wohlelo oluqokwe kuma-Crown Gospel Awards.
INJABULO uhlelo lomsakazo womphakathi uMgungundlovu FM luqokwa emcimbini wezindondo owaziwa ngokuthi ama-Crown Gospel Awards.
Uhlelo Sidumisa Inkosi luqokwe emkhakheni we-Best Gospel Community Radio Show.
Umcimbi wezindondo uzobe useThekwini e-Inkosi Albert Luthuli International Convention Centre(ICC) mhla zingama-24 kuLwezi (November).
Umethuli walolu hlelo, uMfundisi Travor Phoswa webandla iGod’s Victory Family Church, uthe kuyisibusiso esikhulu ukuthi lolu hlelo luqokiwe emcimbini wezindondo omkhulu kangaka.
Ekhuluma ne-Echo uthe unethemba lokuthi le ndondo izobuya ize ekhaya ngosizo lomphakathi ukuba bavotele lolu hlelo.
“Ukuqokwa kwethu kulezi zindondo kuyakhombisa ukuthi lolu hlelo kukhona umehluko olwenzayo ezimpilweni zabantu abaningi kanye nabalaleli.
“Sijabule kakhulu kanti futhi sinethemba ukuthi umphakathi uzoseseka sikwazi ukuthi sibuye nayo lendondo.Ukuwina kwethu le ndondo kuzobe kungayona eyami futhi kuzobe kungayona eyohlelo nje kuphela okanye kodwa kuzobe kungeyomphakathi waseMgungundlovu wonkana. Ukuyiwina kwethu kuzosiza ukuthi kuphakame igama ledolobha lethu laseMgungundlovu ngoba phela lezi zindondo zinkulu kanti zidume umhlaba wonke,” kubeka yena.
UMfu Phoswa uthe usesakaze uhlelo lwezenkolo iminyaka engaphezu kweyishumi, kanti wake waqokwa kuzona lezi zindondo ngonyaka wezi-2011.
Uthe inhloso enkulu ngalolu hlelo alusakazayo ukubuyisa ithemba ebantwini kanjalo nokubakhuthaza ukuthi bangapheli mandla kukona konke abakwenzayo.
“Sifuna ukunikeza abantu ithemba ukuthi bazi ukuthi noma kungathiwa yini ababhekene nayo empilweni njengamanje, impilo iyaqhubeka kanti futhi kusazolunga uma ngabe bebeka ithemba labo eNkosini,” kubeka yena.
Ukuvotela lolu hlelo thumela umqhafazo othi: Crown 15, enombolweni ethi: 41872.
I-SMS ibiza u-R2 kanti kuvotwa noma ikangaki.